Uyenza njani ingxelo yemali? | Ezezimali
Kuyo nayiphi na inkampani, kubaluleke kakhulu ukuba kukho ulwazi oluchanekileyo noluneenkcukacha malunga nokwenzekayo ngaphakathi kuyo, ukubonisa uluntu, kuyo imimandla eyahlukeneyo okanye amacandelo Injani i imisebenzi kunye neenkqubo, kunye nayo yonke into efanelekileyo enokusetyenziselwa ukwenza izigqibo malunga noku, lulwazi olunceda ngaphakathi ukusukela koku, Abanini zabelo baya kuba nembono ebanzi yenkunzi yabo yangoku, Kunye nokusebenza okufumanekayo, kwaye kusekwe koku kwenza izigqibo ezinolwazi malunga nekamva lenkampani.
Ingxelo yemali kukudityaniswa kolwazi apho umhlalutyi, ngokusebenzisa amagqabantshintshi, iinkcazo, iingcebiso, imizobo, iirafu, njl.njl. iikhonsepthi nezixa-mali eziqulethwe kwiingxelo zezemali ezo yayizizinto awayezifunda ngaphambili. Umxholo wale ngxelo wenziwe yincwadi yokubhalela okanye incwadi yokubhalela, ethi yona yenziwe ngamacwecwe amabini kunye nongcelele lwamaphepha apho ibhengeza oku kuchazwe ngasentla, yakhiwe ngeendlela ezahlukeneyo zokufundisa ulwazi oluthile noluyimfuneko.
Iinkampani azinakho ukubhengeza njengombutho ozimeleyo; kuphela Uhlalutyo lwedatha yezemali yangaphakathi yanele ukwenza ungenelelo olufanelekileyo nolufike ngexesha kwimeko yezemali kunye nenzuzo yeshishini, olu hlalutyo lunokuncedwa ngolwazi oluthile malunga neemeko ezigcinwayo ngaphakathi kwenkampani, kunye nohlalutyo lweemeko ezikhoyo ngaphandle kweshishini, nalapho inkampani ingenayo Ulawulo.
1 Ukulungiswa kwengxelo yemali kulawulo loshishino
1.2 Imvelaphi yengxelo
1.3 Isiteyithimenti sezemali
1.4 Iitshathi kwingxelo yemali
1.5 Izimvo, iingcebiso kunye nezigqibo
2 Iindidi zeengxelo zemali
2.1 Ingxelo yangaphakathi
2.2 Ingxelo yangaphandle
2.3 Ingxelo epheleleyo
2.4 Ingxelo ephuhliswe ngokufanelekileyo
3 Izicatshulwa ngenjongo yolawulo
4 Ingxelo eneenkcukacha ngeenjongo ezithile
5 Iingxelo zezimali ngokusekwe kwiiparameter
Ukulungiswa kwengxelo yemali kulawulo loshishino
Ingxelo evela kumbono wezinto ezibonakalayo inokumkela ezi ndawo zilandelayo
Icandelo elingaphandle elingaphandle lezembozo lenzelwe:
Ihlelo, kwimeko yomsebenzi kutoliko lweengxelo-mali okanye isihloko esihambelana nayo.
Umhla okanye ixesha ezingqinelana ngalo neengxelo zemali.
Le nxalenye yefayile ye- Ingxelo kulapho uhlalutyo nomsebenzi wophando usekwe khona, kwaye yenzelwe oku kulandelayo:
Iinkcukacha kunye nobubanzi bomsebenzi owenziweyo.
Imbali emfutshane yenkampani, ukusuka ekuqaleni kwayo ukuya kumhla wengxelo yakutshanje.
Inkcazo emfutshane yeempawu zorhwebo, zezemali nezomthetho zenkampani.
Iinjongo ezifunwa ngulo msebenzi ucacisiweyo.
Ukutyikitya kwabo banoxanduva lokwenza ingxelo.
Kweli candelo lengxelo, zonke iingxelo zemali inkampani ebinazo kwixesha elimiselweyo ngaphambili zinikezelwe, ngokubanzi ngendlela eyenziweyo kunye nothelekiso, ukuqinisekisa ukuba isigama sicacile, siyafundeka kwaye siyafikeleleka kwabo baya kuba nelungelo ulwazi olunikiweyo.
Iitshathi kwingxelo yemali
Ngokubanzi, iingxelo zezemali zihlala zinothotho lweegrafu eziqhubela phambili ukufumaneka kweekhonsepthi kunye nezixa ezibonisiweyo kumxholo weengxelo zezimali, kuxhomekeke kumhlalutyi ukuthatha isigqibo ngenani elifunekayo leigrafu kunye nendlela.
Izimvo, iingcebiso kunye nezigqibo
Yilapho ingxelo iphelela khona kwaye apho amagqabantshintshi ahlukeneyo anokufikelela kuwo adityaniswe ngendlela enocwangco, emfutshane nefikelelekayo yila umhlalutyi onoxanduva lwengxelo; Kwangokunjalo, iingcebiso kunye nezigqibo ziyaziqonda kwaye zinolwazi lwenyani, kulapho kukho ingxaki okanye iinkcukacha ezichaziweyo ngexesha lokulungiswa kwengxelo, kunye nesiphumo soku soku xa kuthelekiswa neengxelo zangaphambili.
Iindidi zeengxelo zemali
Las IiNkampani zikaRhulumente eziNqunyelweyo ezinemali eyahlukileyo, phantsi koxanduva lwabo bayilawulayo, kufuneka bangenise kwintlanganiso yabanini zabelo yonyaka, yekota okanye yenyanga, ingxelo yezemali ebandakanya ubuncinci kwi:
Ingxelo evela kubalawuli ngenkqubela phambili yenkampani ngonyaka, kunye nemigaqo-nkqubo elandelwa ngabalawuli kwaye, ukusilela oko, kwiiprojekthi ezikhoyo ezikhoyo. Ingxelo enika inkcazo kunye nemigaqo-nkqubo ephambili yocwangciso-mali kunye neenqobo zokugweba ezithathelwe ingqalelo, ukuhambelana nolwazi lwezezimali
Isiteyitimenti sengeniso esibonisa, kunye nokuhlelwa kwayo okufanelekileyo kunye nenkcazo, iziphumo zenkampani.
Ingxelo yangaphakathi Yenziwa ngeenjongo zolawulo kwaye umphathi wenkampani unonxibelelwano oluthe ngqo neefayile ezibalulekileyo, unokufikelela kwiincwadi zogcino mali kwaye ngokubanzi yonke imithombo yolwazi lwezezimali enalo ishishini, isezandleni zabo simahla.
Iziphumo zomsebenzi wakho zigqibelele kuba Umhlalutyi wangaphakathi unolwazi ngokuhamba kunye nezinto ezizodwa ukuba ishishini lingaveza.
Uhlalutyo lwangaphandle, kwicala layo, yahlukile kuba yenziwa ngaphandle kwenkampani, nokuba ngumcebisi wotyalo-mali, umhlalutyi wekhredithi, okanye nabani na onomdla wokufunda ngakumbi malunga nokuba inkampani inesiqhamo kangakanani. Ukulungiselela iinjongo zangaphandle kunye noluntu ukuba lube nolwazi lolwazi oluyinyani kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu emva kokuvunywa kolwazi ngabanini benkampani.
Kwingxelo yangaphandle, umhlalutyi uhlala engenanxibelelwano nenkampani kwaye ekuphela kolwazi oluqinileyo olufumanekayo yile nto ithe inkampani ithathela ingqalelo kufanelekile ukuba ibonelelwe ngumphicothi zincwadi. Ye uhlalutyo olululo lweeNkcazo zeMali Kufuneka ixesha elininzi, kunye nemali kunye nomzamo.
Ukwenza ifayile ye- Ingxelo echanekileyo mayenze intetho eyaneleyo, ngendlela eya kuthi ibambe umdla womfundi, ke ingxelo kufuneka ibenezi mpawu zilandelayo:
Ukunikezelwa kolwazi oluhle nolungathandekiyo.
Ingxelo ephuhliswe ngokufanelekileyo
Uhlalutyo kufuneka lwahlulwe lube ngamanqanaba, luphawulwe kwisalathiso ekuqaleni koxwebhu, nganye nganye ibonisa ukukhula kwezi zihloko zilandelayo ngendlela enengqiqo kunye nendalo, ingxaki kunye nesiseko sesisombululo siza kuqala, ngokucacileyo izigqibo isiphelo.
Ingxelo kufuneka icace kwaye ibe nexabiso
Iinyani kufuneka zenziwe ngokucacileyo, ngezigqibo zazo ezifanelekileyo kunye neengcebiso ezifike ngexesha elifanelekileyo, izisombululo kufuneka zahluka ngokuxhomekeke kwingxaki.
Ingxelo kufuneka ibonakale
Ibhekisa kwinto yokuba kufuneka ingaqulathi izinto zangaphandle kwingxaki, kwaye kufuneka ibhekise kwiimeko ezithile zenkampani. Unonophelo kufuneka luthathwe ukuthintela ukukhutshwa kunye nokwenziwa ngokubanzi.
Ingxelo kufuneka ibe ngexesha
Ukubaluleka kwengxelo kuxhomekeke kakhulu kwindlela idatha efunyenwe ngayo, ulwazi kufuneka luhlale lufike ngexesha, kuba ingxelo engalindelekanga ibangela imeko engeyonyani kunye neengxaki ezinkulu ngaphakathi kwinkampani ngenxa yenkohliso notshintsho.
Kuxhomekeke kwinjongo yengxelo, iimpawu zoku zinokwahluka, emva koko ezinye zithandwa kakhulu.
Izicatshulwa ngenjongo yolawulo
Olu hlobo lwengxelo lwenzelwa ukuphendula eyona mibuzo iphambili yalo naliphi na igosa elilawulayo elinomdla kwinkampani, phakathi kwabantu abanokuba nomdla zezi:
Izabelo zinomdla okhethekileyo ekuvavanyeni rhoqo ukusebenza kolawulo. Kwelinye icala, banomdla wokwazi iziphumo ngexesha lolawulo lwabo, benika ingqalelo ekhethekileyo kulwazi lobalo. Abanini zabelo kuya kufuneka bathathe isigqibo sokuba bazithengise izabelo zabo okanye bathenge ngaphezulu.
Los Abacebisi babatyali mali baya kuhlalutya ulwazi lwezezimali ifunyenwe ukubonelela ngeenkonzo ezingcono kubathengi bayo.
Abahlalutyi bamatyala baya kufunda ulwazi lobalo lwabafakizicelo kwingxelo ukukhetha abo baya kunikwa ikhredithi.
La Unobhala kaNondyebo uya kuhlala ethelekisa iinzuzo ezifunyenweyo, njengoko kucacisiwe kwinkcazo yemali, kunye nengeniso yehlabathi eboniswa kwingxelo yerhafu.
Imibutho yabasebenzi iyakuphonononga ulwazi lobalo, egxininisa ukuba ulwabiwo lwenzuzo kubasebenzi lusekwe kwingeniso yehlabathi yesibhengezo serhafu.
La I-Stock Market ihlala ifuna ukuba yonke imibutho enezabelo ezidweliswe kwi-Stock Market inika ulwazi oluyinyani. ngamaxesha athile.
Ingxelo eneenkcukacha ngeenjongo ezithile
Este Uhlobo lweengxelo lulungiselelwe iprojekthi ethile okanye injongo, ezinje ngeprojekthi, ukufunyanwa koomatshini, utyalo-mali lwenkunzi, ukukhutshwa kwezabelo, ukunyuswa kwemali, ukufumana inkxaso-mali, phakathi kwezinye izinto. Ngesi sizathu le ngxelo kufuneka iqulathe:
Umbono ocacileyo wenzuzo ukuya kwixesha elimiselweyo.
Isicwangciso esicetyiswayo sokugcina ibhalansi phakathi kwezinto zenzuzo, oko kukuthi, umthamo wentengiso, umda opheleleyo kunye neendleko zokusebenza.
Fumana inzuzo enkulu kunaleyo ikhoyo ngoku inkampani, kubasebenzi bayo, kwiiMpahla, kubathengi nakwimali eyinkunzi kwimali mboleko nakweminye imithombo.
Iingxelo zezimali ngokusekwe kwiiparameter
Ngaba ezo ngxelo zengeniso apho iiparameter ezithile zithathelwa ingqalelo, Ezona ndlela zisetyenziswa rhoqo zohlalutyo zezi zilandelayo:
Iimali kunye nokuhamba kwemali
Iingxelo zemali zenziwa ngokwabantu abaza kuzisebenzisaOku kunokuba ngaphakathi nangaphandle. Uqeqesho luya kuba lolwabanini kunye namalungu enkampani ukusuka kwelona nqanaba liphezulu ukuya kwelona liphantsi apho banokulisebenzisela ukulunge ngakumbi kwaye bandise inzuzo kunye nemveliso.
Iya kuba yile ijolise kulawulo lwenkampani, eyona njongo yayo iphambili kukuvavanya ukusebenza kwenkampani, ukubona iindawo ezibuthathaka nezomeleleyo kuyo, kananjalo, ngokusekwe koku, ukuseka amanyathelo okulungisa kwezo ndawo ichaphazele imisebenzi.
Le yangaphandle, iya kuba yiyo efunekayo iinkampani zomntu wesithathu ezinje ngoRhulumente, abanokutyala imali, abahlalutyi bamatyala kwaye ngamafutshane kuluntu ngokubanzi, Ngubani onokuyisebenzisela iinjongo ezahlukeneyo ukuqonda ngcono inzuzo yenkampani.
Ngaba uyafuna ukwenza isicwangciso sezemali? Bhalisa ezinye izimvo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Uyenza njani ingxelo yemali?
UMartin Malave sitsho
Ndiyincoma kakhulu kuwo wonke umntu
MARIA LUZ LLUMIGUANO CHELA sitsho
Nceda ungathanda ukuba ndithumele itemplate yengxelo
Eddy cisneros sitsho
Ulwazi luchanekile kakhulu, ndiya kuba nombulelo ukuba kunokwenzeka ukuba undithumelele ingxelo yemodeli, enkosi
Phendula uEddy Cisneros
UJuan Daniel Carvajal sitsho
Kwezinye iinkampani ezinje nge-eInforma, zibandakanya ulwazi lwezomthetho kwingxelo yezemali. Ngaba ucinga ukuba iluncedo nakwezinye iingxelo zohlobo olufanayo?
Phendula kuJuan Daniel Carvajal
Umgaqo-nkqubo uza kuthengiswa esidlangalaleni ngo-2017
Uyityala njani ikrismesi enamanqatha?